Ungawakhetha kanjani amakhethini e-PVC?
Izinga lokushisa elijwayelekile, siphakamisa amakhethini ejwayelekile e-PVC. Izinga lokushisa eliphansi, siphakamisa amakhethini we-Polar PVC strip. Ku-workshop, siphakamisa amakhethini e-Welding PVC. Endlini yokugcina izimpahla, siphakamisa amakhethini e-Ribbed PVC strip. Ukuze uthole okunye okukhethiwe, sicela uxhumane nathi. Ukusetshenziswa Okuvamile Nezinzuzo ze-PVC Strip ...
I-PVC yi-thermoplastic ejwayelekile yokwenza umsebenzi jikelele futhi inezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza. Okwamanje luhlobo lwesibili ngobukhulu lomkhiqizo wepulasitiki olandela okwesibili ku-polyethylene esezingeni eliphansi. Imikhiqizo ingahlukaniswa ngemikhiqizo enzima nemikhiqizo ethambile: Isicelo esikhulu semikhiqizo enzima yi-pip ...
I-Polyvinyl Chloride (i-PVC) ingelinye lama-polymer asetshenziswa kakhulu emhlabeni (eduze kwamaplastikhi ambalwa asetshenziswa kakhulu njenge-PET ne-PP). Kuyinto emhlophe ngokwemvelo futhi echachamba kakhulu (ngaphambi kokungezwa kwama-plasticizers) epulasitiki. I-PVC ibiside isikhathi eside kunamaplastikhi amaningi ha ...